Malatya Diyarbakır Fur Gezin ဘူတာများကြားရှိလေလံ၊ လေလံရလဒ် RayHaber
Homeလေလံပွဲလေလံရလဒ်များကိုMalatya, သားမွေးလိုင်းစခန်းများအတွက်တင်ဒါ၏ရလဒ်အဖြစ်ပြုမိပတျဝနျးကငျြ Diyarbakir ခရီးစဉ်
13 / 09 / 2019 Levent Elmastaş လေလံရလဒ်များကို, လေလံပွဲ 0
ထွေးပွေ့နုရလဒ်များကိုရာ၌ဘူတာအကြားသားမွေးလမ်းကြောင်းရှာရန်၏ malatya diyarbakir လိုင်း
Malatya, Diyarbakir ခရီးစဉ်သားမွေးလိုင်းစခန်းများမိုင်အကွာအဝေး: + 380 550 380-950 အဆိုပါတင်ဒါ၏ရလဒ်အဖြစ်ပြုမိပတျဝနျးကငျြ +
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး5။ နောက်ဆုံးရလာဒ်များအရသိရသည်အလုပ်အကိုင်အနူးညံ့ 2019 ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနုကိုမပူဇော်ပတ်ဝန်းကျင်လုပ်ခြင်းအဖြစ် 392548 + 284.148,83-419.347,00 + 380: ဒေသဆိုင်ရာပစ္စည်းဝယ်ယူရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး (TCDD) 550 / 380 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 950 TL နှင့် Malatya Diyarbakir လိုင်းသားမွေးခရီးစဉ်စခန်းများမိုင်အကွာအဝေးအတွင်းရှိ 49 TL အကြောင်းကိုကုန်ကျစရိတ် HAYRETTİN ATAS ရရှိခဲ့အဆိုပြုချက်ကို tweaking နှုန်း 284.800,00 ။ နုလေလံပါဝင် 20 ကုမ္ပဏီများကန့်သတ်တန်ဖိုးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ခဲ့သည်။
ခြံစည်းရိုးပြားအလုပ်ကိုအဖြစ်တင်ဒါနှစ်ချက်တိုင်ကနေတစ်ဆင့်တိုးတက်လာသောခုခံနှင့်အတူလုံခြုံရေး panel ကို2ပါဝင်သည်။ ပေးပို့အလုပ် 120 (တရာနှစ်ဆယ်) ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်းထံမှကြာချိန်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Malatya-Diyarbakir လိုင်းစခန်းများတစ်သားမွေး-ခရီးစဉ်ပတ်ဝန်းကျင်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် 22 / 08 / 2019 STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)5၏စီးပွားရေး TC အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးပြုလုပ်ခြင်းပတ်ဝန်းကျင်တစ်သားမွေး-ခရီးစဉ်အဖြစ် Malatya နှင့် Diyarbakir လိုင်းစခန်းများ။ အလုပ် 380 အမှတ်အပိုဒ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးပညတ်တရား၏ 550 အားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်ဘယျအရာဆောက်လုပ်ရေးပတ်ဝန်းကျင်အကြား 380 + 950-4734 + 19: အဘူတာရုံ KM ထံမှ REGION ယ်ယူခြင်းဦးစီးဌာန MALATYA DİYARBAKIR LINE သားမွေး-ခရီးစဉ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 392548 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) နေရပ်လိပ်စာ: Gazi ရပ်ကွက်အတွင်း Medeniyyet CAD ။ NO: 10 /244080 YEŞİLTEPE / YEŞİLYURT / MALATYA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 4222124800 - 4222124816 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: https: //ekap.kik xnumxbolgemalzeme@tcdd.gov.t သုံးခုသည်) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကို web address ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ gov.tr/ekap / ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Malatya Diyarbakir လိုင်းဘူတာအကြားပြုမိနူးညံ့ကြိတ်ရထားလမ်းကာကွယ်လမ်းသက်တမ်းတိုး၏ဧရိယာထဲမှာဖောင် -Gezin- မှ 05 / 11 / 2012 ရထားလမ်းကြိတ်ကာကွယ်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံလမ်းမကြီး၏ဧရိယာ၌ထည့်သွင်းရန် Malatya Diyarbakir လိုင်း -Gezin- ဖောင်ဘူတာနုဝယ်ယူရေးရုံးဒေသန္တရရုံး5.BÖLGအဆိုပါကုန်စည်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မရှင်နူးညံ့သောအထူးကုÜZEYİRÜLKERနူးညံ့ADRESİTCDD Administration 5.BÖLGညွှန်ကြားရေးမှူး / MALATYA ပုံတယ်လီဖုန်းဖျက်သိမ်းနှင့်မျှမတို့0ဖက်စ် 422 212 48 00 / 41180422 212 48 16 ကြော်ငြာနေ့စွဲ 30 / 10 / 2012 နောက်ဆုံးနေ့နေ့စွဲနှင့်အချိန် 09 / 11 / 2012 တွင် TIME: 14: 00 SPECIFICATION ကုန်ကျစရိတ် 100 - TL လေလံ TCDD စာချုပ်အသုံးအနှုန်းများ 3-သေနတ် 15 ။ FILE ကို NUMBER ကို 2012 / 154374-5 e-mail လိပ်စာဝယ်ယူရန် SUBJECT ကိုလေလံ SERVICES ကန်ထရိုက်ဆောငျးပါး xnumxbolgemalzeme@tcdd.gov.t နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနညျးပညာဖြစ်ပါတယ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Malatya Diyarbakir လိုင်းဘူတာအကြားပြုမိနူးညံ့ကြိတ်ရထားလမ်းကာကွယ်လမ်းသက်တမ်းတိုး၏ဧရိယာထဲမှာဖောင် -Gezin- မှ 05 / 11 / 2012 ရထားလမ်းကြိတ်ကာကွယ်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံလမ်းမကြီး၏ဧရိယာ၌ထည့်သွင်းရန် Malatya Diyarbakir လိုင်း -Gezin- ဖောင်ဘူတာနုဝယ်ယူရေးရုံးဒေသန္တရရုံး5.BÖLGအဆိုပါကုန်စည်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မရှင်နူးညံ့သောအထူးကုÜZEYİRÜLKERနူးညံ့ADRESİTCDD Administration 5.BÖLGညွှန်ကြားရေးမှူး / MALATYA ပုံတယ်လီဖုန်းဖျက်သိမ်းနှင့်မျှမတို့0ဖက်စ် 422 212 48 00 / 41180422 212 48 16 ကြော်ငြာနေ့စွဲ 30 / 10 / 2012 နောက်ဆုံးနေ့နေ့စွဲနှင့်အချိန် 09 / 11 / 2012 တွင် TIME: 14: 00 SPECIFICATION ကုန်ကျစရိတ် 100 - TL လေလံ TCDD စာချုပ်အသုံးအနှုန်းများ 3-သေနတ် 15 ။ FILE ကို NUMBER ကို 2012 / 154374 ဝယ်ယူရန် SUBJECT ကိုလေလံ SERVICES ကန်ထရိုက်ဆောငျးပါး xnumxbolgemalzeme@tcdd.gov.t နညျးပညာအီလက်ထရောနစ်စာပို့ ADDRESS ကိုဖြစ်ပါတယ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Fevzipaşa-လိုင်း Malatya-Diyarbakir Diyarbakir လက်ဝါးကပ်တိုင်တံတားကို Maintenance လုပ်ခြင်းအတွက် 30 / 04 / 2018 တံတားကို Maintenance အကြားတွင်Fevzipaşa-Malatya-Diyarbakir Diyarbakir လိုင်း STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)5၏ TC အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး၌ပြစ်မှားမိ။ REGION ယ်ယူခြင်းဦးစီးဌာန TCDD FEVZİPAŞA-DİYARBAKIR LINE MALATYA DİYARBAKIR internucleotide တံတားအများပြည်သူဝယ်ယူရေးပညတ်တရား၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး 4734 19 အပိုဒ်အမှတ်ဖျော်ဖြေဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 204848 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) နေရပ်လိပ်စာ: Gazi ရပ်ကွက်အတွင်း Medeniyyet CAD ။ NO: 10 /244080 YEŞİLTEPE / YEŞİLYURT / MALATYA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 4222124800 - 4222124816 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolgemalzeme@tcdd.gov.t သုံး) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါတယ်အင်တာနက်ကိုလိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်: ...
Making ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တင်ဒါရလဒ်ပတ်ဝန်းကျင်စခန်းများကြားမှာခဲ Sumrucak 28 / 06 / 2018 မြစ် Zonguldak လိုင်း Sumrucak စခန်းများမိုင်အကွာအဝေး leaded: 166 M ကအကြား 200 + 167-700 + 3000 နှုန်း 2018 အကြောင်းကိုကုန်ကျထားတဲ့တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအထွေထွေညွှန်ကြားမှု (TCDD) 273214 / 763.319,45 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 1.021.290,00 TL ၏ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တင်ဒါရလဒ်ပြုလုပ်ခြင်းပတ်ဝန်းကျင် Irmak- zonguldak လိုင်းစခန်းများ Sumrucak ခဲမိုင်အကွာအဝေး: 166 200-167 + M + 700 3000 လုပ်ငန်းတင်ဒါဖော်ဆောင်ရေးနှင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့် 15 နှုန်းကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ AYDIN ​​ရရှိခဲ့အဖြစ်တင်ဒါ 779.400,00 တစ်ခုတည်းကုမ္ပဏီမပူဇော်နိုင်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကြားမှာ။ နုလေလံပါဝင် 1 ကုမ္ပဏီများကန့်သတ်တန်ဖိုးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ နူးညံ့သော, 3000 မီတာကွန်ကရစ်အမှတ်တရ Panel ကိုပတျဝနျးကငျြ structures များအလုပ်အကိုင်များကိုဖုံးတပ်ဆင်ထားသည်။ ပေးပို့ 180 အလုပ်ကနေကြာချိန် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Malatya-Diyarbakir လိုင်းစခန်းများတစ်သားမွေး-ခရီးစဉ်ပတ်ဝန်းကျင်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအဖြစ်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Malatya Diyarbakir လိုင်းဘူတာအကြားပြုမိနူးညံ့ကြိတ်ရထားလမ်းကာကွယ်လမ်းသက်တမ်းတိုး၏ဧရိယာထဲမှာဖောင် -Gezin- မှ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Fevzipaşa-လိုင်း Malatya-Diyarbakir Diyarbakir လက်ဝါးကပ်တိုင်တံတားကို Maintenance လုပ်ခြင်းအတွက်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Shake Diyarbakir နှင့်လမ်းပြုပြင်ရေးလုပ်လက်ဝါးကပ်တိုင်ငှားရမ်းထားယာဉ်များ Malatya Baskil စခန်းများ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Malatya - Diyarbakir စာလုံးပေါင်းနှင့် trapezoidal လိုင်းများပြုသောအမှုဆက်ထိန်းထားသောမြို့ရိုးရေနုတ်မြောင်းတူးမြောင်းအလုပ်အကြားလိုင်းကွဲဖို့
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စခန်းများ Tec-ကွိုင်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးဝါယာကြိုးလှောင်အိမ်ကြား Making ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးသောကီလိုမီတာမှ